Yiziphi izitshalo zokulahlekelwa kwesisindo eziphumelela kakhulu?
Mhlawumbe, zonke izintombazane zivakashelwe ngezinye izikhathi imicabango yokukhipha isisindo esiningi , kuyilapho zingabangeli ukulimala empilweni. Namuhla, kuneyodwa indlela enjalo - amakhambi asebenzayo kakhulu ekulahlekeni kwesisindo, ukuthi yiziphi.
Ukukhuluma ngokujwayelekile, indlela ephelele yokulahlekelwa amakhilogremu engeziwe kuhlanganisa ukuthuthukiswa komzimba jikelele, futhi ibuye ithinte ngokuqondile umzimba kanye nomgudu wamathumbu.
Ukuhlukaniswa kanye nezici zamakhambi ezisiza ukulahlekelwa isisindo
Amakhambi anjalo angahlukaniswa ngezigaba ezimbili:
Amakhambi anciphisa ukufisa nokucindezela umuzwa wendlala. Uma ingeniswa, i-mucus ivuliwe, ngenxa yalokho umphumela we-saturation kwenzeka. Futhi, utshani lungakwazi ukuvuvukala ngaphakathi, okuyinto futhi isignali yamanga ye-satiety. Umthelela onjalo ungaba nembewu ye-flax noma i-algae "spirulina".
Amagciwane akhipha umzimba we-fluid ngokweqile. Njengomthetho, uketshezi oluthe xaxa kunendawo yokuqoqa ngokuqondile emathisini amafutha. Ukulikhiphela kuzosiza amakhambi anjengensimu ye-horsetail noma i-cowberry. Umphumela omuhle kakhulu wokususa uketshezi emzimbeni nokulahlekelwa isisindo kufanele: i-anise, imbewu ye-caraway nedill.
Amagciwane ukunciphisa ukudla nokunciphisa umzimba
Imvelo ngokwawo inikeze umuntu izipho ezingapheli, okudingeka ukuthi uthole isicelo esifanele kuphela.
Emzabalazweni wokunciphisa isisindo sotshani ukulahlekelwa kwesisindo esiphuthumayo kusebenza kakhulu futhi kuphephile kunemithi eminingi yanamuhla. Imifino ngayinye yenza isenzo sayo, ngakho-ke kudingeka ufunde isenzo ngasinye.
The frostbite . Usiza ukubhekana nezifo ezihlukahlukene. Le imbiza idala umphumela we-laxative, okukuvumela ukuba uhlanza amathumbu, ususe slag, usawoti. Ikhuthaza ukuvuselelwa komzimba, kanye nomphumela onenzuzo esimweni sesikhumba.
Umsuka we-althaea yisitshalo somuthi. I-Tincture esuka empandeni isisiza ukunciphisa ukudla, ngaleyo ndlela ibe nomphumela omuhle kuwo wonke umzimba. Umphumela we-tincture kusuka empandeni wukuthi ubangela umuzwa wokugcwalisa, futhi izinto zawo ezinamanzi ziphazamisa ukuvinjelwa kwejusi esiswini. I-Pectin, equkethe impande ye-althea, ithuthukisa umsebenzi wegciwane lokugaya.
Senna . I-Senna iyimifino ye-laxative enomphumela we-antiseptic. Ngesizo salo ungakwazi ukugwema ukungena kwamanzi kanye ne-electrolytes kusuka ezindongeni zamathumbu amakhulu. Ukwehliswa kwe-Senna kukuvumela ukuba ususe amafutha angaphezulu, ukudla namanzi emzimbeni. I-Senna ibhekwa njengenye yezinambuzane eziphumelela kakhulu zokulahlekelwa isisindo.
Ikhofi yekhofi eluhlaza
Iviniga ye-Apple yokulahlekelwa isisindo: iresiphi
Ukuzivocavoca ngamafutha ashisa
Dandelion isisindo sokulahleka
I-Fitomycil yokulahlekelwa isisindo - indlela yokuyithatha ngokunembile nangempumelelo?
Kungenzeka yini ukuba udle imbewu ye-sunflower uma ulahlekelwa isisindo?
Ukushisa kwe-lymphatic drainage
Kungani ngingakwazi ukulahlekelwa isisindo?
Imikhiqizo engadliwa ngokulahlekelwa isisindo
Ungashisa kanjani amafutha angaphansi kwesikhumba?
Ukudla kwe-sodium ukuze ulahlekelwe isisindo
I-cocktail yokuthola isisindo
I-Tunisia - ezikhangayo
Gqoka ngesitayela sesiGreki
Amathrendi - Ehlobo 2016
Iresiphi yesaladi lesithelo ne-ayisikhilimu
Okuqukethwe kwekhalori yezithelo ezomile
Umdlalo othakazelisayo ngesithunzi emidwebo kaVincent Bal
Izimbali zonyaka zokuhlala ehlobo
Ukulala nokuphakamisa indlela
Iwayini elivela kumameriyamu
Yisiphi izinga lokushisa kwamathanga amanzi elungile?
Iziphuzo ze-Suede Beige
Amaqebelengwane ama Honey - zokupheka ezilula nezokuqala zekhekhe lasekhaya
Hlanza umhombo nge-hydrogen peroxide
Ikhekhe lekhofi - izithelo zokupheka zase dessert ezenziwe ekhaya
Ukuntuleka kwe-Magnesesi - izimpawu
UTom Ford usolwa ngokukhwabanisa inkantolo
I-skate yezingane ezitholakala ngaphakathi - senza isinqumo esifanele
Kungani ukukhala ezindebeni kuphupha?
Zingaki izinsuku inja inomkhuhlane?